မိစ္ဆာပရောဖက်အဖို့သတိပေးခြင်း | Apg29
သတိထား, အံ့သြစရာမောင်နှမဖြစ်လိမ့်မည်။ မိစ္ဆာပရောဖက်အများနှင့်တရားဟောဆရာကို Facebook ပေါ်တွင်နှင့်အချို့သောအသင်းတော်နယ်ပယ်အတွက်နေရာတိုင်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်သူတို့ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ပညတ္တိကျမ်းစောင့်သောအားဖြင့်သတိထားဖြစ်ခြင်းမပါဘဲယေရှု၏ကားစင်တင်ငြင်းပယ်ထားပါတယ်။
သငျသညျပရောဖကျတ, တရားဟောဆရာသို့မဟုတ်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ကြောင်းဖျောသငျ့အားသတိပေး။ သငျသညျကိုလူဥပဒေအရအသက်ရှင်ဖို့လှည့်ဖြား။ သင်သည်သင်၏အယူမှားပရောဖက်ပြုချက်နှင့်တရားဒေသနာသူတို့နှင့်အတူတွှေ။ သငျသညျလှညျ့စားခြင်းဖြင့်သူတို့အပေါ်မှာပါဝါရှိသည်နှင့်အကျင့်တရားနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းအကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်ဖို့သတိပေးသည်။ မဟုတ်ရင်ငါသည်သင်တို့နေသောထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ် - ငါသင်သည်သင်၏အမှန်ဆိုရလျှင်မှပွနျလာပွီးယရှေုကိုလက်ခံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
ငါသည်သင်တို့သိကြနှင့်သင်၏အပြစ်ကိုခံပုပ်သောအရာကိုအသီးကိုငါသိ၏။ သငျသညျငါးခြောက်လမှမိစ္ဆာပရောဖက်, တရားဟောဆရာများနှင့်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်သူတို့ကအတုနှင့်အယူမှား, ပရောဖက်ပြုဖြစ်ကြသည်တရားလူများ sibling ကိုသတိထားပါ။
ထိုအခါဥပုသျနေ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်စသည်တို့ကို, ဝက်သားမစားကြဘူး, မမှန်သောမုသာဖြစ်ကြ၏။ ဒါဟာယူမှားဖြစ်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာမဟုတ်ပါဘူး။
နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနဲ့ရောဂါကျိန်ဆဲသောဘုရားကျောင်း၌ဟောပြောသောသင် - ကမုသားနှင့်ယူမှားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဘယ်မှာကျမ်းစာထဲမှာဆိုသနည်း
, ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ဤမရှိရာဒသမအသုံးအနှုန်းများ, တစ်ကားကိုကားမောင်းနေစဉ်နှငျ့သငျအဖြစ်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အကြာပရောဖက်ပြု?
တဖန်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန် 164 ဥပဒေများရှိပါတယ်ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပြည်နယ်များချင်သငျသညျအဘယျသို့ဆိုလိုပါသလဲ ပညတ္တိကျမ်း၌ရှိကြ၏သော 613 အပြင်? သို့မဟုတ်သင် 613 ထဲက 164 ကိုရွေးချယ်သူတို့ကိုကိုင်သင့်သလဲ ဒါဟာအယူမှားနှင့်မုသားဖြစ်ပါတယ်။
2020 ခုနှစ်, သင်တို့၏နာမသင့်ယူမှားနှင့်အတူတည်လျှင်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကျော်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျတို့သညျငါ့ကိုအကြောင်းကိုလိုချင်တာတွေစဉ်းစားရန် - ငါမင်းကိုချစ်ပေမယ့်မပေးသငျသညျကိုကောင်းစွာခံစားခြင်းနှင့်ဖျားနာသည်, မပိုနေသောအယူမှားနှင့်အလှည့်စားသောလူခြင်းတရားကိုဟောပြောသောအခါအနဲ့တူလုပ်ပါ။
သို့သော်လည်းကရုဏာတော်ကြွယ်ဝတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောအချိန်မှာတောင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်လျက်ရှိသောအတူတူဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, ဤမျှလောက်ချစ်သောစိတ်နှင့်အကျွန်တော်တို့ကိုချစ်၏။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသိမ်းပြီးပါပြီ။ ဟုတ်တယ်, သူကအတူတူကျွန်တော်တို့ကိုထမြောက်စေခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကာလ၌ယေရှုခရစ်၌ကြှနျုပျတို့အပျေါကြင်နာမှုသူ၏ကျေးဇူးတော်သည်၎င်း၏လွှမ်းမိုးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုသရုပ်ပြဖို့အကြောင်း, ယေရှုခရစ်၌ကောင်းကင်အရပ်၌အတူတကွထိုင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏နှင့်တစုံတယောက်သောသူသည်ဝါကြွားစေခြင်းငှါကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်, ကကြောင့်အကျင့်ကိုကျင့်၏ဘုရားသခငျ၏လကျဆောငျမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သည်သူတို့အထဲ၌လမ်းလျှောက်သင့်ကြောင်းကြိုတင်ကိုပြင်ဆင်သည့်ကောင်းသောအကျင့်ဘို့ယေရှုခရစ်၌ created သူ၏လက်ရာ, ဖြစ်ကြ၏။
သူသည်ဇာတိပကတိ၌စီရင်သောပညတ်တို့ကိုတလူသစ်ကိုမိမိအထဲ၌ထိုနှစ်ခု၏အထုံးအဖွဲ့တို့ကို၏တရားတို့သည်ရန်ငြိုးဖယ်ရှား, ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်တဲ့အခါဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ "
ဧ 2: 4-10, 15 SFB98
"သူ့ကိုခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ရဲရငျ့စှာနဲ့စိတ်ချလက်ချဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရပ်နိုင်ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်။ " ဧဖက် 3:12 SFB98
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခင်မှာကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းထားထားရှိမည်ခဲ့ကြသည်ယုံကြည်ခြင်းထင်ရှားစေမည်ဟုသည်အထိပညတ်တရားအားဖြင့်စောင့်ခဲ့သည်ရောက်လာတယ်။ ပညတ္တိကျမ်းငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်စေခြင်းငှါ, ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းဖြစ်သတည်း။ "
ဂလာတိ3း 23-24 SFB98
ဒါဟာအာဗြဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်သည်ကမ္ဘာ့အမွေခံရဖို့ဂတိတော်ကိုခံသောပညတ်တရားအားဖြင့်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြွလာသောဖြောင့်မတ်မှတဆင့်။ ပညတ်တရားကိုလိုက်နာသောသူတို့အားအမွေခံဖြစ်ကြလျှင်, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာနှင့်အင်အားထဲကထားဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောအချည်းနှီးပါပဲ။ ပညတ္တိကျမ်းဒေါသအမျက်ထုတ်လုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်တရားမျှမပါ, အဘယ်သူမျှမလွန်ကျူးခြင်းရှိ၏။ "
ရောမ 4: 13-15 SFB98
13 အခနျးငယျ, အာဗြဟံသူသည်ပင်အာဗြဟံ၏ထိုအချိန်ကပရိသတ်တွေ၏တရားသညျဘုရားသခငျကိုယုံကြည်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခဲ့သည်။
"ဒါပေမယ့်အကျင့်တရားလည်းဤမျှလောက် သာ. ကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်ကိစ္စတွင်မှလာ၏။ အပြစ်တရားတိုးမြှင့်ဘယ်မှာသို့သော်ကျေးဇူးတော် ပို. ပင်တိုးပွါးစေ "
ရောမ 5:20 SFB98
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စနစ်တကျတဦးတည်းအသုံးပြုမှုလျှင်ပညတ်တရားတော်အကောင်းကြောင်းကိုသိသည်သူတို့အဘို့, လူသတျသမားအဘို့, သူ့ဖခင်နှင့်မိခင်နှောင့်ရှက်သောသူတို့အဘို့, ညစ်ညူးခြင်းနှင့်အဓမ္မအဘို့, ဖြောင့်မတ်ဘို့ပေမယ့်ဥပဒေမဲ့နှင့်ပုန်ကန်သော, တရားမဲ့နှင့်ဆိုးသောသူတို့အဘို့မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက် ကျွန်ကုန်သည်တွေ, မုသာဝါဒီများ, perjurers အဘို့နှင့်ရှိသမျှသောအခုခံတွန်းလှန်သံကိုအယူဝါဒအဘို့, မတရားသောမေထုန်ကိုများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းလေ့ကျင့် - "
တိမောသေ 1: 8-10 SFB98
ပညတ္တိကျမ်းသည်ကောင်းပေမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသင်တို့ရှိသမျှသည် 613 တရားကိုစောင့်သောသူသည်ဆိုလိုသည်မှာတစ်နည်းအတွက်အသင်းများ, အပြစ်တရားဘယ်တော့မှ Burrow မှစီမံခန့်ခွဲဘူးပါသလဲ? သို့မဟုတ်ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဥပုသ်နေ့သို့မဟုတ်ဒသမစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပညတ္တိကျမ်းကပြောပါတယ်အဖြစ်ဝက်အသားနှင့်အစသည်တို့ကိုမစားကြပါလျှင်,
သငျသညျသူတို့အား 613 ၏တဦးတည်းချိုးဖောက်လျှင်, သငျသညျတစျခုလုံးကိုတရားမပျက်ဘူးပြီနည်း ထိုအခါဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်မမှတ်, ထို့နောက်သင်သောသူတို့၏အမျိုးအတဝတည်းဖြစ်ကြ၏
, ရာဇဝတ်သားများနှင့်, ပုန်ကန်သောမတရားသောသူတို့နှင့်အပြစ်သားမီလီမီတာ
"ဒါပေမယ့်အကျင့်တရားစောင့်ကြည့်ကပ်လျက်သူမည်သူမဆိုတစ်ဦးကျိန်စာအောက်မှဖြစ်ကြသည်။ ကျမ်းစာလာသည်ကား: "မင်္ဂလာရှိပညတ္တိကျမ်းစာအုပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တို့ကိုကျင့်သမျှသောရန်တွယ်ကပ်မထားဘူးသူတစျဦးဖွစျသညျ '' ။ "
ဂလာတိ 3:10 SFB98
ရောမ 3:28 SFB98
"ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖခင်အာဗြဟံသည်အကျင့်အားဖြင့်အနိုင်ရပြီဘာပွောနိုငျသလဲ ဒါပေမယ့်မရဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ - အာဗြဟံသည်အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ကြေညာခဲ့လျှင်, သူ၏ဝါကြွားဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်။ ကျမ်းစာ၌အဘယ်သို့လာသနည်း "အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည် ဖြစ်. , သူ့ကိုမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ " မဟုတ်ကျေးဇူးတော်, သူတို့ရဲ့လစာလက်ခံရရှိရန်အချက်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရရှိထားပြီးပါပြီတစ်ခုခုအဖြစ်သူတဦးတည်း။ သို့သော်အမှုသည်အမြဲမတည်ခြင်းမရှိဘဲတဦးတည်း, သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ဘို့ရေတွက်သည်တရားမဲ့မိန့်ရှိတော်မူသောသူကိုယုံကြည်ဘူး။ "
ရောမ 4: 1-5 SFB98
သင့်ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်သင့်ရေဖျားလှီးခြင်းကိုသဘောသဘာဝ၌သေလျက်ရှိနေသောသူကိုသငျသညျလညျးသငျသညျခရစျတျောနှင့်အတူအသက်ရှင်ရှိပါတယ်။ သူကငါတို့အားလုံးကိုပြစ်မှုများမှလွှတ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်အတူကတိမှတ်စုကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်ထွက်ဆိုထွက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ သူကလက်ဝါးကားတိုင်ပြုလုပ် nailing အားဖြင့်မပယ်ရှားခဲ့သည်။ "
ကောလောသဲ 2: 13-14 SFB98
ယေရှုခရစ်၌ရှိသောဝိညာဉျတျော၏ဘဝပညတ်တရားသည်အကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်နှင့်သေမင်း၏ပညတ်တရား၏လက်မှလွတ်စေတော်မူပြီ။ ဒါကြောင့်လူ့ဇာတိအားဖွငျ့ဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာအားနည်းခြင်း, တရားမဖြစ်နိုင်ခဲ့သညျဘုရားသခငျသညျဘုရားသခငျအပွစျကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချအပြင်ပန်းတစ်ပွစျရှိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်သောသူမူကား, သူ၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးအပြစ်ဖြေရာယဇ်အဖြစ်မိမိသားတော်ကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ပြုလေ၏။ "
ရောမ 8: 2-3 SFB98
ဘုရားသခင်အဘို့ဤမျှလောက်အကြင်သူသည်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်တာကိုပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရပေမယ့်ရှိသည်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်ဟု, မိမိသာဖြစ်ဘွားစေသားတော်ကိုပေးသောကမ္ဘာကြီးကိုချစ်တော်မူ၏။ "
ယောဟန် 3:16 SFB98
ယရှေုသညျစျြခွငျးမတ်ေတာသငျသညျကိုယျတျောသငျသညျပြုမူရန်ရှိသည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နှင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ကြောင့်လူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်မှုအဖြစ်ဥပဒေအရ 100% နေထိုင်ခဲ့တယ်။
အဘယ်သူမျှမဇာတိပကတိအားဖြင့်အပညတ္တိကျမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ကြလိမ့်မည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်အပြစ်မသိဖြစ်လာသည်။ "
ရောမ 3:20 SFB98
ပညတ္တိကျမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်။ , ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားလိုအပ်မည်မဟုတ်ပေ။
"အဘယ်ကြောင့်" ယုံကွညျခွငျး၏, "ကကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏အဘဖြစ်၏သူသည်ပညတ်တရားကိုလူများပိုင်သောသူတို့အဘို့ဒါပေမယ့်လည်းအာဗွဟံ၏ယုံကွညျခွငျးရှိသောသူတို့အဘို့မသာ, ကျွန်အပေါင်းတို့သည်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့မြဲမြံစွာရပ်တည်ရန်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဂတိတော်အားဖြင့်ဖြစ်အံ့သောငှါ။ "
ရောမ 4:16 SFB98
"သင်ဥပဒေအရပေမယ့်ကျေးဇူးတရားအောက်တွင်မဟုတ်များအတွက်သိန်, သင်အုပ်စိုးရှိသည်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်။ "
ရောမ 6:14 SFB98
"ဒါကြောင့်လည်းခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်သင်တို့ညီအစ်ကိုတို့, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အဘို့အသီးဘွားသင့်ကြောင်း, သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်သောသူ, သင်သည်အခြားဆိုင်ကြောင်း, တရားသေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်လာကြပြီ။ "
ရောမ 7:4SFB98
(အရေးကြီးသော) တစ်ခုလုံးကိုရောမ7ဖတ်ရှုပါ
နှင့်ယောဟန်ဗတ္တိဇံဆရာများ၏လက်ထက် မှစ. ယခုတိုင်အောင်အကြမ်းဖက်မှုများအကြောင်းမဲ့ကောင်းကင်ကညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ကြသည်အကြမ်းဖက်မှုယောက်ျား၏နိုငျငံတျော။ လူအပေါင်းတို့သည်ပရောဖက်အများနှင့်ပညတ်တရားသည် "ယောဟန်မရောက်မှီတိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကြပါပြီ
မဿဲ 11: 12-13 SFB98
"ဒီဥပဒေနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းယောဟန်မရောက်မှီတိုင်အောင်မိမိတို့၏အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်, လူတိုင်းကိုရိုက်ထည့်ပါရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ "
လုကာ 16:16 SFB98
အဘယ်သူမျှမကအခြားအခြေခံအုတ်မြစ်လုပ်နိုင်တဲ့မည်သူမဆို, ယရှေုခရစျသထားကြ၏ကြောင်းထက်အိပ်လေ၏။ "အဘို့
ကောရိန္သု 3:11 SFB98
ပဌမပဋိညာဉ်တရားကိုမေးပြန်သော်ခဲ့လျှင်, တစ်စက္ကန့်များအတွက်အာကာသရှိထားဖို့လိုမယ်လို့သည်။ "
ဟေဗြဲ 8:7SFB98
တစ်ဦးကစက္ကန့် IE ကောင်းတဲ့အအသင်းမှ။
ဖိလိပ္ပိ 1:2SFB98
ဒန်ယဲလ်ဂါဗြေလက Facebook ။